(7) QOF OO AY AAD U JECESHAHAY IN AY QANIINTU KANEECADA - Awdinle Online
Arrimo badan ayaa kuu soo jiidan kara kaneecada in ay adiga si khaas ah kuu qaniinto in ka badan dadka kugu xeeran,
Waxaana kamid ah waxyaalahaas aadka usoo jiita,
1= KAARBOON- DAYOKSAYD
Dhamaanteen dadka oo dhan waxaan soo saarnaa hawada kaarboon dioxide marka aan neefsanno,
Waxaan sidoo kale soo saareynaa kaarboon badan markii aan shaqeyno ama jimicsi badan sameyno,
Hadaba kaneecada ayaa aad u jecel hawadaas kaarboonka ah waxa ayna aada ama u jiheysataa meesha ay ku badan tahay hawadaas kaarboonka,
sidaas darteed dadka sida aadka u neefsada ama jimicsiga badan sameeya aad ayey u jeceshahay kaneecadu in ay qaniintu.
2= URKA JIRKA AMA DHIDIDKA
Qof walba waxa uu leeyahay nooc u gaar ah uu usoo shiiro jirkiisu marka uu dhidido gabar iyo wiilba,
hadaba kaneecada ayaa waxaa aad usoo jiito urka jirka qayb kamid ah,
Noocyada ay aadka u jeceshahayna waxaa kamid ah dadka uu maqaarkoodu ay ku badan tahay maadooyinka “lactic acid iyo ammonia”
Baarayaasha waxay wali baarayaan sababaha kala duwanaanshaha urta jirka taas oo dadka qaarkiis u soo jiidata kaneecada. Sababahaasna waxaa ka mid noqon kara hiddo-wadaha qofka oo ah in lakala dhaxli karo maadooyinkaas ay kaneecadu jeceshahay,
Oo la micno ah in caruurtaada ay kula mid noqon karaan si lamid ah sida ay adiga kaneecadu kuu jeceshahay.
Kaneecadu aad u jeceshahay qayb badan oo kamid ah dadka aadka uu jirkoodu uu u dhidido.
3= MIDABKA MADOOW
Cilmi baaris ayaa muujisay in kaneecadu ay aad u soo jiidato midabka madow ayna jeceshahay midabkaas,
laakiin wax yar ayaa laga ogyahay sababta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad xirato dhar midab madow ama midabyo kale oo mugdi ah, waxaa suuragal ah inaad kaneecada aad soo jiidato.
Midabka Madoowga ah aad ayey u jeceshay kaneecadu.
4= KULEYLKA IYO UUMIGA BIYAHA JIRKA KA BAXA
Jidhkeenu waxa uu dhaliyaa kuleyl wuxuuna soo saaraa heer uumiga biyaha u dhow,
Uumiga dadka way kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran heerkulka nagu hareereysan.
Maaddaama kaneecadu inoo soo dhowaato, waxay ogaan kartaa kuleylka iyo uumiga biyaha. Tani waxay door ka ciyaari kartaa haddii ay go’aansato inay qaniinto. Hal daraasad ayaa lagu ogaaday in kaneecadu u dhaqaaqdo meelaha kuleylka ka agdhow ee heerkulka la doonayo,
qof walbana qofka uu ka uumi soo saar badanyahay kaneecadu waa kasoo jiidan ogyahay.
5= DADKA DAROOGADA IYO KHAMRIGA ISTICMAALA.
Daraasad yar oo 2002 la sameeyay taas oo lagu kalsoon yahay waxay eegtay saamaynta ay isticmaalka khamriga iyo daroogadu u leedahay soo jiidashada kaneecada. Baarayaasha waxaay ogaadeen in dadka khamriga caba ama daroogada isticmaala inay aad u jeceshahay kaneecada marka loo eego dadka aan cabin.
Mukhaadaraadka oo dhan dadka isticmaala way xiiseysaa kaneecadu in ay u cunto.
6= HAWEENKA UURKA LEH
Cilmi baarisyo lagu kalsoon yahay ayaa muujiyay in kaneecadu u muuqato inay aad u soo jiitaan dumarka uurka leh marka loo eego haweenka aan uurka lahayn.
Tan waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah haweenka uurka leh waxay leeyihiin heerkul sare oo jirka ah waxuuna jirkoodu soo saaraa dheecaano badan oo kaarboon dioxide ah.
Kaneecadu in ay qaniinto aad u jeceshahay dumarka uurka leh.
7= DHIIGA O
Dadka nooca dhiigoodu uu yahay O ayey aad u jeceshahay kaneecadu in ay qaniinto marka loo barbar dhigo dadka noocyada kale ee dhiigga leh.
MEELAHEE AYEY JIRKA KA JECESHAHAY IN AY QQNIINTO KANEECADU
Guud ahaan, kaneecadu way qaniineysaa maqaar kastoo ay u aragti in ay kaheleyso cunno dhiig.
Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inay doorbidaan goobo cayiman.
Hal daraasad duug ah ayaa lagu ogaaday in laba nooc oo kaneeco ah ay door bidaan inay qaniinaan madaxa iyo cagaha.
Baarayaasha waxay rumeysan yihiin in heerkulka maqaarka iyo tirada qanjirada dhididka ee meelahaas ay door ka ciyaareen doorbidan.
MAXAY KANEECADU U QANIINTA DADKA?
Kaliya kaneecad Dhadigga ah(dumarka) ah ayaa dadka qaniinta,
Tanina sababteedu waa in ay u baahantahay dhiig ay quudato si ay usoo saarato ukumo ay ku taranto,
Halkii mar waxa ay soo saari kartaa 30 ilaa 300 oo ukumood,
hadana isla marka ay soo saarto ukumaha waxay u baahanaysaa in ay islamarkiiba ay ku qaniinto si ay ukumo kale usoo saarato,
Kaneecada Labka ah (ragga) ah isagu dadka ma qaniino ama ma quuto dhiigga dadka,
Wuxuuna door bidaa necorka iyo casiirka ay soo saartay dhirta in uu quuto.
Casharada inoo xiga haduu Alle yiraahdo waxaan ku faah-faahin doonaa “Sida looga hortagi karo in ay kaneecadu ku qaniinto”
“Sida aay iskaga yareyn karto xanuunka qaniinyada kaneecada”
“Sababta ay u cun cunto meesha ay qaniinto kaneecadu.
Hadii aad ahayd dadka ay aadka u jeceshahay kaneecadu in ay qaniinto fadlan comments inoogu reeb 7 daas nooc ee ay aadka u jeceshay in qaniinto sabab kamid ah hadii aad leedahay.
Hadii aad ka Faa’iideysatay mowduucaan fadlan Gaarsii Asxaabtaada oo la wadaag SHARE garee ama halkaan ugu wac mid iyo labo si ay iyaguna walaalahaa ay uga faaiideystaan.
W/Q: Dr. Amen
Previous articleHormuud Telecom of Somalia denies Shabaab Links
Next articleSawiro:- Wasaaradda Gaashaandhigga oo Tababar u dirtey Urur ka mid Ciidan XDS